टेकराज पोखरेल, नवलपुर : नवलपुर, तनहुँ र चितवनको सिमानास्थित धार्मिक महत्वको स्थल देवघाटधाममा माघ लागेसँगै दिनानुदिन पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । माघ मात्र नभई यहाँ साउन महिनामा पनि ठूलो सङ्ख्यामा दर्शनार्थी पुग्ने गर्र्छन् । विशेष चाडपर्व र..
काठमाडौं : हिन्दु धर्मग्रन्थ रामायण र महाभारतका बारेमा धेरैलाई थाहा छ । तर, रामायणमा रहेका केही महापुरुष पात्रहरु महाभारतमा पनि थिए भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । आखिर को– को थिए त ती ५ पात्र ? १. हनुमानः रामायणका प्रमुख पात्र हनुमान..
रामु आचार्य, रत्ननगर : श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल प्रारम्भिक समिती, टिकौलीको ३० औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर आज भरतपुर महानगरपालिका १० मा रहेको साहाराको घरमा आश्रित वालवालिकाहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ । साहाराको घरमा रहेका १८ जना..
चितवन : तमु प्ये ल्हु संघ चितवनले राष्ट्रिय जनगणनामा गुरुङको मौलिक धर्म बोन लेख्न र लेखाउन गाउँगाउँमा चलाएको अभियानलाई थप तिव्र पारेको छ। राष्ट्रिय जनगणनाको मिति नजिकिएसँगै संघले चितवनको गाउँगाउँमा सो अभियानलाई तीव्र रुपमा सञ्चालन गरेको..
तीन लाख भक्तजनले देवघाटमा स्नान गरे २०७७, २ माघ शुक्रबार
चितवन : माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा तीन लाखभन्दा बढी भक्तजनले पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटस्थित त्रिशूली र कालीगण्डकीको सङ्गम वेणीमा स्नान गरेका छन् । स्नान गर्नका लागि भक्तजन बुधबारदेखि नै देवघाटधाम पुगेका थिए । देवघाट क्षेत्र..
कोरोना कहरका विच देवघाटमा बढ्यो भिड (फोटोफिचर) २०७७, १ माघ बिहीबार
चितवन: पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा स्नान गर्न आउनेहरुको भिड बढेको छ । गत वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष भक्तजनहरु कम आएको भए पनि राम्रो उपस्थिति रहेको देवघाट क्षेत्रबिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक धिरणबाबु घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अघिल्ला..
चिसो स्याँठ र डम्म हुस्सुबीच तिलासक्रायत मनाइँदै २०७७, १ माघ बिहीबार
महोत्तरी । लगातार चिसो स्याँठ चल्ने र चारैतिर डम्म हुस्सुले ढाकेबीच मैथिल (मिथिलाका बासिन्दा) तिलासक्रायत पर्व मनाइँदैछ । पछिल्ला चार दिनयता लगातार चिसो स्याँठ बहिरहने र दिनभरि घाम नदेखिएर चारैतिर डम्म हुस्सुले ढाकिएको अवस्था छ । माघे..
माघे सक्रान्तिले सामाजिक र साँस्कृतिक एकतालाई सुदृढ बनाउने राष्ट्रपतिको विश्वास २०७७, १ माघ बिहीबार
काठमाडौँ । आज माघ १ गते, माघे सक्रान्ति । माघे सक्रान्तिको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना दिएकी छन । माघे संक्रान्तिले आपसी एकता र सद्भाव अभिवृद्धि गर्न मद्दत मिल्ने राष्ट्रपति भण्डारीको अपेक्षा लिएकी छन । नेपालका विभिन्न..
भगवान विष्णुलाई सुदर्शन चक्र दिने को हो ? २०७७, १ माघ बिहीबार
काठमाडौँ : आस्थिक मानिसहरूका मनमा अनेकौँ जिज्ञासा हुन्छन् । भक्त र भगवानका बारेका रहस्य अध्ययन साध्य नै पनि छैन । आजचाँही हामी भगवान विष्णुलाई सुदर्शन चक्र कसले दियो भन्ने बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँदैछौँ । भगवान विष्णुसँग जोडिएका अनेक..
माघी : थारु समुदायको नयाँ आर्थिक वर्ष शुभारम्भ २०७७, १ माघ बिहीबार
-मुना चौधरी माघी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बसोबास गर्ने थारु समुदायले मनाउने पर्वहरुमध्येको एक पर्व हो । अनादिकालदेखि तराई र भित्री तराईमा बसोबास गर्दै आएका थारुहरुले माघी मनाउँछन् । यसको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने यकिन..